Ukuhlobisa - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Enye into ebalulekile ekufezeni ukubukeka kwakho okufisayo yindlela yokupakisha kwakho kuqediwe ngayo.
Sinikeza izinketho eziningi ezahlukahlukene ongakhetha kuzo, kufaka phakathi umbala ongaphakathi kwesikhunta, izifutho zangaphakathi nezangaphandle, i-metallization, ne-spray finishes efana ne-pearl, matte, touch soft, glossy, ne-frosted.
Ukujova umjovo kuyinqubo yokukhiqiza yokukhiqiza izingxenye ngokujova okufudumele nokuxubekile, okufana nengilazi namapulasitiki, kusikhunta lapho kuphola khona futhi kuqinise ekucushweni komgodi. Lesi yisikhathi esifanele sokuba umbala wakho owuthandayo ube yingxenye yalokho okubhaliwe uqobo, kunokuba ungezwe kamuva.
UKUFALELA KWANGAPHAKATHI / KWANGAPHANDLE
Ukugcoba isifutho esitsheni kunika amandla okwenza umbala owenziwe ngokwezifiso, ukwakheka, ukuthungwa, noma konke - kungilazi noma kupulasitiki. Njengoba igama liphakamisa, kule nqubo iziqukathi zifuthwa ukuze zithole umphumela oyifunayo - kusuka ekubukekeni okuneqhwa, umuzwa oqoshiwe, isizinda sombala esisodwa senkambiso yokuqedela ukwakhiwa okuqhubekayo, noma kunoma iyiphi inhlanganisela yomklamo ongayicabanga enemibala eminingi, iyaphela noma i-gradients.
Le ndlela iphindaphinda ukubukeka kwe-chrome ehlanzekile ezitsheni. Le nqubo ifaka ukufudumeza okokusebenza kwensimbi egumbini elinomshini kuze kuqale ukuhwamuka. Insimbi evuthayo iyaqina futhi ibopheleke esitsheni, esishintshaniswa ukusiza ukuqinisekisa ukuthi kufakwa isicelo esifanayo. Ngemuva kokuthi inqubo yokwenziwa kwensimbi isiqediwe, kufakwa ijazi lokuzivikela esitsheni.
Ukubekisa ngemidwebo kwakha isithombe esiphakamisiwe futhi ukukhipha imali kususa isithombe esehlisiwe. Lawa masu engeza inani lokufaka uphawu lomkhiqizo kuphakeji ngokwakha umklamo we-logo oyingqayizivele abathengi abangathinta futhi bazizwe.
Le ndlela yokuhlobisa kungenye indlela yokusebenzisa isikrini sikasilika. Uyinki udluliselwa engxenyeni ngokucindezela kanye ne-roller evuthayo yesilicone noma afe. Ngemibala eminingi noma amalebula anethoni uhhafu, amalebuli wokudlulisa ukushisa angasetshenziswa azonikeza ikhwalithi yombala, ukubhaliswa kanye namanani entengo wokuncintisana.
I-Hydro-graphics, eyaziwa nangokuthi ukucwiliswa kokucwiliswa, ukuphrinta ukudluliswa kwamanzi, ukudlulisa amanzi, ukucwilisa amanzi noma ukuphrinta ama-cubic, kuyindlela yokusebenzisa imiklamo ephrintiwe ezindaweni ezi-ntathu. Inqubo ye-hydrographic ingasetshenziswa kwinsimbi, ipulasitiki, ingilazi, izinkuni eziqinile, nezinye izinto ezahlukahlukene.
Ebhizinisini lezimonyo, lobuhle, nokunakekelwa komuntu siqu, ukufakwa kuphathelene nemfashini. Ukumbozwa okubandayo kudlala indima enkulu ekwenzeni iphakethe lakho ligqame emashalofini okuthengisa.
Noma ngabe ukuthungwa okuneqhwa noma indawo ecwebezelayo, ukumboza kunika iphakethe lakho ukubukeka okuthile okukhangayo.
UKUSHINTSHA OKUSHISAYO / KOKUVULA
Ukunyathela okushisayo kuyindlela lapho kufakwa khona ucwecwe olunemibala ebusweni ngokuhlangana kokushisa nengcindezi. Isitampu esishisayo sikhiqiza ukubukeka okucwebezelayo nokunethezeka kumashubhu wezimonyo, amabhodlela, izimbiza nokunye ukuvalwa. Ama-foil anemibala imvamisa ayigolide nesiliva, kepha i-brushed aluminium nemibala ye-opaque nayo iyatholakala, ilungele ukwakhiwa kwesiginesha.